कोरोना प्रकोपले युरोप पनि आक्रान्त, बेलायतमा उच्च सतर्कता- विश्व - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १५, २०७६ नवीन पोखरेल
लन्डन — विश्‍वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस(कोभिड १९) ले युरोप पनि आक्रान्त भएको छ । यसबाट युरोपेली मुलुक इटाली सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । समाचार तयार पार्दासम्म इटालीमा १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४ सय ७० जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट कोरोना फैलिएयता बेलायतमा ७ हजार एक सय ३२ जनाले परीक्षणगराइसकेको जनाइएको छ। तीमध्ये १३ जनामा पाजिटिभ भेटिएको थियो।
बेलायतले कोरोना भाइरसविरुद्ध उच्च सतर्कता अपनाएको छ। बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककले सरकारले सर्वसाधारणका लागि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। बेलायती संसद् ‘हाउस अफ कमन्स’मा भाइरसबारे पछिल्लो अपडेट गराउदै मन्त्री ह्यानककले बेलायतले अरु धेरै केस सामना गर्नुपर्ने स्वीकार्दै अहिले नै यसबारे बढी उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया नदिन आग्रह गरेका छन्।
बेलायती अखबार डेली मिररले एउटा सरकारी कागजातलाई उद्धृत गर्दै बेलायतमा कोरोना फैलिए ५ लाखको मृत्यु हुन सक्ने र ८० प्रतिशत बेलायती संक्रमित हुने चेतावनी दिएको उल्लेख गरेको छ।
बेलायतमा दुई सातायता चीन, थाइल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, हङकङ, ताइवान, सिंगापुर, मलेसिया र इटालीबाट फर्किएपछि भाइरसको लक्षण देखिए एनएचएस १११ मा सम्पर्क गर्न भनिएको छ।
ब्रिटिस एयरवेजले २७ फेब्रुअरी देखि ११ मार्चसम्म लन्डन-मिलानका २२ राउण्ड उडान रद्द गरेको छ। तेल कम्पनी चेभरोनले आफ्नो एक कर्मचारीको परीक्षणपछि लन्डनका तीन सय जना कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न भनेको छ।
इटालीबाट फर्किएका विद्यार्थी पढ्ने ८ विद्यालय बन्द गरिएको छ। बेलायतभरका ८ वटा अस्पताल र १०० वटा जीपी सर्जरीमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्नेहरु बढेका छन्।
बेलायतमा करिब दुई लाख नेपाली रहेको अनुमान छ। अन्य युरोपेली देशहरु आक्रान्त बनिरहेका बेला बेलायतवासी नेपाली पनि कोराना भाइरसबाट त्रसित देखिन्छन्।
नेपलिज नर्सिङ एसोसिएसन यूकेका अध्यक्ष विनोदविकास सिम्खडा सेन्ट्रल लन्डन कम्युनिटी एनएचएस ट्रष्टमा काम गर्छन्। उक्त ट्रष्टका लन्डनका धेरै ठाउंमा कम्युनिटी क्लिनिक छन्। ‘ती सबै क्लिनिकमा आउने बिरामीहरुका लागि छुट्टै प्रोटोकल छ’, सिम्खडाले भने, ‘यदि कुनै बिरामीलाई शंकास्पद लक्षण देखिएमा क्लिनिकमा नआउन बरु घरबाटै फोनमा सम्पर्क गर्न सल्लाह दिइएको छ।’ उक्त ट्रष्टले कुनै कर्मचारी संक्रमित क्षेत्रबाट फर्किएको छ भने १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ।
‘हाम्रो ट्रष्टको क्लिनिकमध्ये निकै व्यस्त हुने लन्डन चाइना टाउन नजिकको सोहो हेल्थ सेन्टर अहिले एकदम सुनसान छ,’ सिम्खडा भन्छन्, ‘चाइनिज नेसनल हेल्थी लिभिङ सेन्टर पनि एउटै भवनमा भएर होला, क्लिनिक सुनसान देखिन्छ।’
लन्डन हयाम्सटेडस्थित रोयल फ्रि अस्पतालमा कार्यरत युरोलोजिष्ट डा. पारस सिंह कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी उपचार गरिनेमध्ये आफ्नो एउटा अस्पताल भएको बताउँछन्। ‘इंग्ल्याण्डको जनस्वास्थ्य विभागले दिएको निर्देशिकाअनुसार नै हामी चल्नुपर्छ’, सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘उक्त विभागको उपचार विधि, शंकास्पद बिरामी पहिचान र व्यवस्थापन, ट्राभल एड्भाइस आदि अनुशरण गर्न भनिएको छ।’ डा. सिंह उच्च ज्वरो, सुख्खा खोकी र सास फेर्न गार्हो हुनु कोरोना भाइरसको लक्षण भएको बताउँछन्।
नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) इंग्ल्याण्डले हरेक अस्पतालमा गर्नुपर्ने तयारी र उपचार विधिका लागि निर्देशिका जारी गरेको क्वीन एलिजावेथ अस्पतालका वरिष्ठ व्यवस्थापक डा. बच्चुकैलाश कैनी बताउंछन्।
‘हरेक अस्पतालमा शंकास्पद बिरामी आउन साथ कसले कसरी जाँच गर्ने, कस्तो किसिमको सतर्कता अपनाउने, अस्पतालको कुन ठाउँमा लगेर राख्ने समेतको ब्यवस्था गरिएको छ’, कैनीले जनाए।अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरुबीचमा समेत कोरोना भाइरसबारे व्यापक सचेतना बढाउने कार्यक्रम गरिएको छ।
फ्रान्समा कोेराेना भाइरसका कारण चीनको वुहानबाट आएका एकजना चिनियाँ पर्यटकसहित २ जनाको मृत्यु भएको छ।
हालसम्म विश्‍वका ४७ देशमा ८२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण चीनमा दुई हजार ७ सय ४४ सहित दुई हजार ८ सय जनाको मृत्यु भएको छ। चीनबाहिर इरानमा १९, इटाली र दक्षिण कोरियामा १२-१२, जापानमा ७, हङकङ र फ्रान्समा २-२ तथा ताइवान र फिलिपिन्समा १-१ जनाको मृत्यु भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनमा भन्दा चीनबाहिर धेरै केस भेटिएको जनाएको छ। मंगलबार चीनमा ४११ जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा चीनबाहिर ४२७ जना संक्रमित भएका छन्।
अष्ट्रिया, क्रोएसिया, ग्रीस र स्विजरल्याण्डले पहिलोपटक संक्रमण भेटिएको जनाएका छन्। इटालीबाट फर्किएकाबाट ती देशमा संक्रमण भएको हो। अफ्रिकी मुलुक अल्जेरिया र ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा पनि पहिलोपटक संक्रमण देखिएको समाचारमा जनाइएको छ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०७:५४
काबेली ‘ए’ अलपत्र
(अमरपुर, पाँचथर) — लगातार काम भएको भए ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमाना भएर बग्ने काबेली नदीबाट यसै वर्ष बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो । मुलुकको विद्युत् आपूर्तिमा योगदान पुग्थ्यो । रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो कि भनेर स्थानीय आशावादी थिए । तर विश्व बैंकको समेत लगानीमा निर्माण सुरु भएको आयोजना एक वर्षदेखि अलपत्र छ । निर्माणस्थलमा झार उम्रन थालेको छ ।
जडित सामानमा खिया लाग्न थालेको छ । आयोजना स्थलमा ‘रुँगालो’ राखेर गेट लगाइएको छ । ‘हामी राति र दिउँसो पालो मिलाएर रुङ्छौं,’ अलपत्र आयोजना रुँगेर बसेका एक युवकले भने, ‘बन्छ बन्दैन, कहिलेदेखि बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।’
स्थानीयले पछिल्लो पटक आयोजना सञ्चालनका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुर्‍याए । सहयोगका लागि समिति नै गठन गरे । आयोजनाको निर्माण तथा पावर हाउस क्षेत्रमा जाने सडकका लागि जग्गा उपलब्ध गराए । सरकारका नाममा आफ्नो जग्गा रजिस्ट्रेसन पनि गरिदिए । अहिले आयोजनाका विषयमा आयोजना स्थलमा रहेका कर्मचारीलाई नबोल्न भनिएको छ । फोटो खिच्न पनि नपाउने नियम राखिएको छ । ११ सय मिटर सुरुङ निर्माणपछि आयोजना बन्द भएको छ । ट्यांकीतर्फ नौ सय र पावरहाउसतर्फ दुई सय मिटर सुरुङ निर्माण गरिएको छ ।
चीनको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार चेचियाङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्स्टलेसन कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीसँगको विवादका कारण आयोजना निर्माण ठप्प बनेको स्थानीय कर्मचारीको बुझाइ छ । चिनियाँ ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द भइसकेको प्रवर्द्धक काबेली इनर्जी कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरसिंह भाट बताउँछन् । आयोजना पुनः कहिले सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा उनले पनि केही खुलाएनन् । ‘कम्पनीको आन्तरिक वा बाह्य कारण हो, तपाईंलाई भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारको ठेक्का तोडियो, नयाँ ठेक्का लागेको छैन ।’
ठेक्का रद्द भएपछि यहाँका ट्रिपरलगायतका उपकरण मध्य तमोर जलविद्युत् आयोजनामा लगिएको छ । मध्य तमोरको काम पनि चिनियाँ ठेकेदारबाट भइरहेको छ । ८० जनासम्म जनशक्ति ल्याएर काम गरेको चिनियाँ ठेकेदारले आफ्ना जनशक्ति फर्काएपछि उपकरण पनि त्यहाँबाट निकालेको हो ।
आयोजनास्थलमा अहिले जडित क्रसर, एक्स्काभेटर मेसिनलगायत उपकरण छन् । गिट्टी बालुवा भने ठूलो परिमाणमा पाखामा निकालेर थुपारिएको छ । आयोजनाले ३७.६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०७:५३